Adiresy: José Arrieta 8200, Santiago, Peñalolén, XIII Metropolitana de Santiago, Chile;
Phone: +56 2 2292 5229;
Ny ora fiasana: isan'andro isaky ny 10:00 hatramin'ny 18:00.
Eo amin'ny tantaranin'ny firenena rehetra dia misy ny taona maizina, marika amin'ny fanonganam-panjakana, ady na loza hafa. Tsy nisoroka an'i Shily ry zareo , firenena iray nahitana fanonganam-panjakana tamin'ny 1973. Hatreto, Villa Grimaldi no toerana fanangonana ny intelligensia Shiliana, tarehimarika ara-kolontsaina.
Horror manjaka ao Villa Grimaldi
Tao Villa Grimaldi dia nisy ny fivorian'ny mpanohana an'i Salvador Allende, raha vao nihazakazaka ho filoham-pirenena izy. Ny velarantanin'ilay tanàna dia 5.190,647 kilometatra toradroa. Ny isam-ponina dia 10.225. Nuvola apps ksig.png Mbola ambangovangony ity lahatsoratra ity ary tokony hofenoina.
Nandritra ny taonjato fahasivy ambinifolo sy ny ankamaroan'ny faha-20, Villa Grimaldi dia nanana ny fianakavian'ny fianakavian'i Aristidean'i Vasallo. Saingy raha jerena ny fanonganam-panjakana nataon'ny miaramila dia nogiazina ny tany, na ny tompony no namidy ilay trano ho takalon'ny famonjeny ny fianakaviany, ary ny toerany dia lasa foibe ho an'ny sehatra miaramila. Toerana feno filaminana sy mahafinaritra dia nanjary mariky ny habibiana sy ny tsy rariny. Trangam-panabeazana maro no feno tao anatin'ilay trano, tsy fantatra afa-tsy taorian'ny nanonganana ny didy jadona.
Tany am-piandohan'ny taona, rehefa tonga teo amin'ny fahefana ny Jeneraly Augusto Pinochet, dia noforonin'ny polisy miafina ao Chile, DINA, ny foibe fampijaliana. Ho an'ny zava-drehetra misy azy, dia olona 5 000 eo ho eo no nanao fampijaliana mahatsiravina. Mba hanafenana ireo habibiana, tamin'ny tapaky ny 80 taona dia nopotehina ilay trano.
Villa Grimaldi amin'izao fotoana izao
Tamin'ny taona 1994 dia lasa tsangambato ho fahatsiarovana ireo taona nahatsiravina nandritra ny didy jadona miaramila ny tany. Taona vitsy taty aoriana, nisokatra ny Park Park ao Villa Grimaldi. Ny fahatsiarovana ireo niharam-boina tamin'ny didy jadona miaramila dia natsangana noho ny fandraisan'andraikitra nataon'ny Fivoriambe ho an'ny zon'olombelona ao La Réina sy Penalolen.
Ny orinasa mpanorina izay nividy ilay trano, dia hanangana toeram-ponenana ao an-toerana. Hatramin'izao, ao amin'ny Park Por la Paz ("Park of Peace"), ireo mpizahatany dia afaka mahita ny "Patio ny faniriana" ary loharano mozika iray. Mandritra ny faritra dia afaka mahita mozika marevaka eny an-dalamby, vita amin'ny ampahany amin'ny lampihazo, izay nanamboatra io faritany io. Asehon'izy ireo ny gadra izay nentina tamin'ny lalana miharihary, ka tsy nahita afa-tsy faritra iray teo ambanin'ny tongony izy ireo.
Naverina indray ny tranolay ary napetraka teo akaikin'ireo toeram-pisakafoanana teo aloha. Ny anaran'ireo olona nanjavona tao amin'ny rindrin'ny polisy miafina dia nosoloana ny trano nisy taloha. Azonao atao ny mahita sary, fananana manokana an'ny voafonja teo aloha tao amin'ny "efitrano fahatsiarovana". Indray mandeha dia nanao tahiry sandoka ho an'ny polisy miafina izy ireo.
Ahoana ny fandehanana any Villa Grimaldi?
Villa Grimaldi dia miorina eo an-tsenan'i Santiago , izay mety hahatratra ny fitateram-bahoaka. Ny fiatoana dia eo akaikin'ilay tranobe.
Ny Tilikambon'i Cali
Ahoana ny fampakarana ny mari-pana vatana?
Ny atin'ny aty - soritr'aretina
Ny aretina amin'ny courgettes sy ny fitsaboana azy ireo
"Sary tsy marina" i Kylie Jenner no niteraka tranga iray
Afo am-balaka amin'ny tananao
Fanehoana hafakely avy amin'i Soosh izay sambatra izay faly ao an-trano!
Ahoana no fomba hanadiovako ny vy?
Fanafody fanariana lymphasy
Inona no hanomezana sakafo ny rat?